XASAASI: Ma dhici kartaa adigoon Calaamadihii Coronavirus lahayn inaad sido Cudurkii...? (Akhriso) | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
BulshadaTooshka GJXog cusubXulashada
Iyadoo dunida halis weyn uu ku hayo cudurka COVID-19 ee uu keeno Cronavirus ayaa waxaa jira su’aalo badan oo aan laga jawaabin oo ku saabsan cudurkan dunida oo dhan rogay, waxaana mar waliba la arkaa dad kala duwan oo faafiya warar been ah iyo kuwo marin habaabin ah oo cudurka ku saabsan.
Covid-19 waa cudur ku cusub dunida, waxaana weli socda dadaalka loogu jiro in wax badan laga ogaado si loogu helo Daawo xilliga dhow iyo tallaal mustaqbalka dhow, sidaasoo ay jirto ayaa haddana waxaa ilaa hadda laga ogaaday cudurka arrimo muhiim ah oo keenay in dad badan ka bogsoodaan, lana qaato tallaabooyin adag oo looga hortegayo.
Su’aasha ah: Ma dhici kartaa adigoon calaamadihii Coronavirus lahayn inaad sido Cudurkii? waxay muhiim u tahay in cudurka laga hortago inta aanu faraha ka bixin, sidaas darteed waxaa la ogaaday arrimaha soo socda:
1- In Coronavirus uu jirka qofka uga soo bixi karo ilaa laba toddobaad (14 Maalmood), waana sababta loo qaatay in dadka looga shakiyo loo karaantiilo mudaddaasi.
2- In Cudurkan si sahlan lagu kala qaado oo si weyn ugu fidayo; taabasho, kulan, meel wada joogis iyo inuu ku noolaan karo hawada muddo saacado ah iyo meelaha kale sida derbiyada ama walxaha adag maalmo.
3- In dadku ku kala duwan yihiin cudurka oo qaarkood uu ka bogsoodo, qaar kale xaalad adag gaarsiiyo, qaarna ay u dhintaan.
4- In dadka qaar aan calamaadihiisa lagu arkin, iyadoo haddana sida, qaar kalena lagu arko calaamadaha.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in ugu yaraan 18% in dadka coronavirus sida aanay yeelan wax calaamad ah ‘asymptomatic’, halka daraasado kale oo laga sameeyay magaalada Wuhan, China ay sheegtay 60% inaan la ogaan dadka siday cudurkan, wax calaamado ahna aan lagu arkin, taasoo keenay inuu si weyn u faafo.
Dad gaaraya 37.400 qof oo qaba coronavirus ayaa ku sugnaa magaalada Wuhan ee dalka China oo ah goobtii uu cudurka ka bilowday, iyadoo aanay ka War heynin mas’uuliyiinta caafimaadka, taasina waxaa ugu wacneyd inaysan dadkaasi lahayn wax calaamad ah, laakiin ay ka qeyb qaateen inuu sii fido cudurka.
Dhinac kale Daraasad lagu sameeyay 565 qof oo u dhashay dalka Japan, kana mid aha dadkii laga soo daadgureeyay magaalada Wuhan waxaa markii la baaray la ogaaday in 30.8% dadkii laga helay cudurka COVID-19 aysan wax calaamad ah lahayn, iyado daraasadda ay tahay mid la isku haleyn karo 95% (Halkan ka akhriso ama kala deg)
Daraasad kale oo lagu sameeyay Markabkii Daimond Princess oo cudurka Coronavirus uu ka dhex dilaacay horaantii bishii Febraayo waxaa lagu ogaaday in 3,711 rakaab ah oo la socday oo marar badan laga baaray cudurka si dhowna xaaladooda loola socday in ku dhowaad 700 qof ay cudurka qaadeen, laakiin 18% dadkaasi aan laga helin wax calaamad ah oo ay dad caadi ah iska ahaayeen. [Halkan ka akhriso daraasadda] -Waxaa daraasaddan ka qeyb qaatay khubaro kala socotay Kyoto University (Japan) Oxford University (UK), iyo Georgia State University (US).
Arrimahan oo dhan waxay muujinayahan in dadka Coronavirus sida 20% ilaa 60% aanay wax calaamad ah ka muuqan, balse uu virus-ka jirkooda ku jiro, taasoo loo aaneynayo inay ka keentay sida weyn ee cudurkan u fido, waxaana mar waliba oo baaritaan lagu sameeyo dad fara badan la helaa tiro aan la fileyn oo sida cudurka, siina gudbineysa, taasoo keentay in magaalooyin iyo dalal waaweyn bandow la geliyo dadkana guryahooda lagu celiyo.
Gabagabadii: waxaa muhiim ah in la raaco tallooyinka caafimaadka, isla markaana aan la siyaasadeyn arrintan cudurka coronavirus, doodna laga abuurin dadka laga helo iyo xaaladooda, iyadoo aan wax cilmi ah loo lahayn.
Dadka siyaasiyiinta ah ee dagaalka siyaaasadeed ku jira waxaa haboon inaysan musiibada Coronavirus kusoo darin sheekooyinkooda, siina jahawareerin dadweynaha, balse ay ka qeyb qaataan wacyi gelinta dadka Soomaaliyeed oo la ogyahay tabarta dowladooda iyo xaaladda ay ku nool yihiin.
Waxaa Diyaariyey: Goobjooge
Coronavirus patients without Symptoms
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo War kasoo saaray Guusha laga gaaray Deyn cafinta Soomaaliya (Akhriso)
Next articleAgaasimihii Machadka Caafimaadka oo beeniyey inuu isu casilay Kiiska Coronavirus “Fadlan been abuurka aan ka fogaano”